संवैधानिक परिषद्ले सुटुक्क सिफारिस गरेको ११ आयोगका ३६ पदाधिकारी कोको हुन् ? (नामसहित)Main Samachar
संवैधानिक परिषद्ले सुटुक्क सिफारिस गरेको ११ आयोगका ३६ पदाधिकारी कोको हुन् ? (नामसहित)
५ पुष २०७७, आईतवार १७:०१ प्रकाशित
काठमाडौँ । विवादास्पद संवैधानिक परिषद्को बैठकले ११ आयोगहरुमा ३६ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ । गत मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् ऐन संसोधन अध्यादेशमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले विभिन्न आयोगहरुमा नाम सिफारिस गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएलगत्तै बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको निर्णयहरु गोप्य राखेको थियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा भएको निर्णय गोप्य राख्दै प्रधानमन्त्री ओली नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गर्न लागेका थिए ।
छलफलबाट केही निष्कर्श ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आज संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष पुर्याएका थिए । संसद विघटन भएपछि मात्र परिषद्ले गरेको सिफारिस संसद सचिवालयमा पुगेको थियो । परिषद्ले गरेका निर्णयहरु अब संसदीय सनुवाइ बेगर नै अगाडि बढ्नेछन्। तर नियुक्तीका लागि ४५ दिनसम्म कुर्नुपर्नेछ।
परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पुर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै आयुक्तहरुमा पुर्व एआइजी जयबहादुर चन्द र किशोर कुमार सिलवाल रहेका छन् । त्यस्तै निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा डा.जानकी तुलाधर सिफारिस भएकी छिन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्षका लागि तपबहादुर मगर सिफारिस भएका छन् । उनिसँगै सदस्यहरुमा मनोज दवाडी, डा. सुर्य डंगोल, लिली बस्नेत थापा र मिना ठाकुर रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जुद्ध गुरुङ र अमर राज मिश्रलाई सदस्यमा सिफारिस गरिएको छ ।
बैठकले महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुलीलाई सिफारिस गरेको छ भने सदस्यहरुमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सुनारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज बिकलाई सिफारिस गरेको छ भने मिना शोब, परशुराम रम्तेल, कुञ्ज बराइली र मेहेने पार्थीलाई सदस्यमा सिफारिस गरेको छ ।
समावेशी आयोगमा मानप्रसाद खत्रीलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको छ । सदस्यहरुमा रामकृष्ण तिमल्सिना र हरिदत्त जोशी सिफारिस भएका छन् । त्यस्तै बैठकले आदिवासी जनजाती आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा सिफारिस भएका छन् । मिनश्रीस मगर, मिनचुङ लामा, रिमा राना र शरण राईलाइ सदस्यमा सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै मधेशी आयोगमा जीवत्व साह, रेणुदेवी साह, र विजय गुप्तालाई सदस्यमा सिफारिस गरेको छ भने थारु आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोध सिंह र भोलाराम चौधरीलाई सदस्यमा सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै मुस्लिम आयोगको सदस्यमा मोहम्मदिन अलि र मिर्जा अरसद बेग सिफारिस भएका छन् ।